Isidoda Insangu Oligopeptide Powder - Factory Yomkhiqizi
I-Semen Cannabis Oligopeptide powder iyi-peptide encane yamangqamuzana ekhishwe kuma-pepenides e-semen cannabis ngama-low-temperature complex enzymatic hydrolysis. Inothile nge-arginine, i-glutamic acid, i-histidine, i-methionine, i-cystine. Futhi, ngeke kubangele ukuthi isisu sihlukane, isicanucanu nokuphendula okweqile.
Isidoda insangu Oligopeptide Powder video
Imininingwane Yesilisa Insangu Oligopeptide Powder Imininingwane
Igama Product Isidoda Insangu Oligopeptide Powder
Color Ophuzi noma Okhanyayo ophuzi
Yini iSemen Cannabis Oligopeptide powder?
Njengamanje, isidoda se-cannabis oligopeptide powder sasetshenziswa kakhulu emkhakheni wokudla okunakekelwa kwezempilo kanye nokudla okusebenzayo.
Ziyini izinzuzo ze-Semen Cannabis Oligopeptide powder?
Vuselela ubende nohlelo lokugaya ukudla
I-semen cannabis i-peptide powder ingalawula ibhalansi yezimbali zamathumbu, ezinomphumela wezindlela ezimbili zokwelapha ekuqunjelweni nasekukhonzweni. Ngasikhathi sinye, inemiphumela emihle yokukhuthaza isilonda nesinyongo.
Isidoda insangu ye-peptide powder inemiphumela enamandla ye-analgesic ne-anti-nfigueatory.
Siza ku-hypolipidemic naku-hypoglycemic
Isidoda insangu i-peptide powder inganciphisa inani eliphelele le-serum cholesterol kanye namazinga e-triglyceride, kanye namazinga kashukela egazini. Futhi kunomthelela wokulawula i-lipids yegazi noshukela wegazi.
Anti-ukukhathala futhi uthuthukise amasosha omzimba
Isidoda insangu i-peptide powder ingathuthukisa ukukhuthazela kokuzivocavoca umzimba, ikhulise okuqukethwe kwe-glycogen yesibindi, yehlise i-acid ye-lactic yegazi, okuqukethwe kwegazi le-urea nitrogen, inomphumela wokulwa nokukhathala; Ngaphezu kwalokho, ingakhuphula kakhulu ukusebenza kwamahlaya kokuzivikela komzimba, ikakhulukazi amandla okwanda kwama-Tlymphocyte nama-phagocyte, futhi iqinisa ukusebenza komzimba komzimba.
I-Antioxidation, ukuguga kwe-anit
Isidoda insangu ye-peptide powder inomsebenzi we-antioxidant, ongasusa ngempumelelo ama-radicals wamahhala futhi wehlise izinga le-lipid peroxide, ngaleyo ndlela udlale umphumela wokuguga.
 Isifundo se-Pharmacological of the Digestive System of Hemp Kerne
 Ukuchoma, i-Anti-lnfigueatory, Imiphumela ye-Antithrombotic Yezimbewu ze-Hemp.
 Umphumela We-Hemao Protein Powder Emisebenzini Engondlekile Nemzimba Yamagundane Esikhathini Esikhulayo.
 Isifundo Sokuqala Sokulwa Nokukhathala kanye Nokulawulwa Kokuzivikela Emzimbeni kweHemp Seed Protein in Amagundane.
 Umsebenzi we-Antioxidant we-Enzymatic Hydrolysis Products ye-Hemp